ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Kang Chang-hee နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Kang Chang-hee နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Kang Chang-hee ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခင်ရွှေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး များဖြစ်ကြသော ဦးအေးမောက်၊ ဒေါက်တာနေလင်းနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးညွန့်လှိုင်တို့လိုက်ပါလျက် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီချိန်တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Kang Chang-hee နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လှိုက်လှဲဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီးနောက် ယခု ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်တွေ့ဆုံရသည့်အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ အဆွေတော်ဦးဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ခရီးစဉ်အား အောင်မြင် အဆင်ပြေမှုရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အဆွေတော်၏ဖိတ်ကြားချက်အရ မိမိ ဦးဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ် လှိုက်လှဲဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုခြင်းများအတွက်လည်းကောင်း၊ ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များ စီမံပေးထားသည့်အတွက်လည်းကောင်း အဆွေတော်အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ အဆွေတော်၏ ဇန်နဝါရီလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ခရီးစဉ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ မြန်မာအစိုးရနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံအစိုးရ၊ မြန်မာလွှတ်တော်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံလွှတ်တော်၊ မြန်မာပြည်သူများနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံပြည်သူများ ယခင်ကထက် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခု ကျွန်တော်၏ခရီးစဉ်မှာ မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုခိုင်မာရန်နှင့် ပိုမိုတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် အဆွေတော်တို့နိုင်ငံ နှင့် လွှတ်တော်တွင် လေ့လာစရာ များစွာရှိပါကြောင်း၊ အဆွေတော်တို့ နိုင်ငံသည် အလျင်အမြန်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုအခါ အဆွေတော်တို့ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသည် ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် အများစုမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁၀)အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည်သာမက ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် အားကစား ကဏ္ဍများတွင်ပါ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခြင်းမှာ အဆွေတော်တို့ နိုင်ငံ၏ ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံရေး စနစ်နှင့် စီးပွားရေးစနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုလို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုစီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မှာလည်း နိုင်ငံ၏အသက်ဝိဉာဉ်နှင့်တူသော အဆွေတော်တို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း ပြောကြား သည်။
ယင်းနောက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင် ရာတွင် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲလမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအား လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ က တပ်မတော်အစိုးရကထူထောင်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ ပထမဦးဆုံး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏သမ္မတ မစ္စတာ ပတ်ချုံဟီး လက်ထက်တွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ပြည်သူတို့လိုလားသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆွေတော်တို့နိုင်ငံတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အပြောင်းအလဲ များဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို သိရှိရပါကြောင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများသည် ခက်ခဲမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်ရင်း နိုင်ငံတော်သည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမြည်ဖစ်ပါကြောင်း၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံနှင့်နည်းပညာများ များစွာရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံတွင် သိပ္ပံနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းဌာနများ များစွာရှိပါကြောင်း၊ လာရောက်၍ လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ နည်းပညာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏သယံဇာတ များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက နှစ်နိုင်ငံအတွက် များစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများ၊ ပြည်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးမှာ အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအနေဖြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သယံဇာတပေါများကြွယ်ဝပြီး တည်နေရာ အရလည်း ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ အရေးပါသည့်နေရာတွင် တည်ရှိပါကြောင်း၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၏ အရင်းအနှီး၊ နည်းပညာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါက နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍ များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှတစ်ဆင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အတူ ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ-ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ HRD လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားလို ပါကြောင်း၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်နှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းများ၊ ဥပဒေများအား မျှဝေပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားသည်။
၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့သည် လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) အား လက်မှတ်ရေးထိုးကာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အမျိုးသား လွှတ်တော်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာချစ် ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ညနေ ၆ နာရီအချိန်၌ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် အထူးဧည့်သည်တော်များထမင်းစားခန်းမ၌ ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား Ulsan မြို့သို့ရောက်ရှိနေချိန်တွင် ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Kang Chang-hee က ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီအချိန်တွင် Ulsan မြို့ရှိ Hyatt Hotel ၌ ညစာစားပွဲဖြင့် ထပ်မံ တည်ခင်း ဧည့်ခံ ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ညစာစားပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး သည် ညစာအတူ သုံးဆောင်ရင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ ၁၂၀၀ နာရီချိန်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မြန်မာ လွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကိုရီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုရီးယား-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Song Gwang-ho,MP က ဆိုးလ်မြို့ရှိ Lotte Hotel ၌ နေ့လည်စာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ၁၃၃၀ နာရီအချိန်တွင် ဆိုးလ်မြို့ရှိ Chang Duk Palace သို့ သွားရောက်လေ့လာရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့ကြသည်။
ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီချိန်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Human Resources Development Service သို့ ရောက်ရှိလေ့လာခဲ့ရာ ခန်းမဆောင်၌ HRD ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Song Yong-fung နှင့်အဖွဲ့က ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် HRD ဥက္ကဋ္ဌ က နေ့လည်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ၁၅၅၀ နာရီချိန်တွင် ဆိုးလ်မြို့ရှိ Han River အတွင်း သင်္ဘောများဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာ ကြသည်။
ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ ၁၀၃၀ နာရီချိန်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Suwon City ရှိ Samsung Electronics ကုမ္ပဏီသို့ ရောက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး ကုမ္ပဏီဧည့်ခန်းမ၌ ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ ကြသည်။ ယင်းနောက် စက်ရုံအတွင်း လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖဲှ့သည် ၁၂၃၀ နာရီချိန်တွင် Chairman of the Korea-Myanmar Friendship Interchange Association ဥက္ကဋ္ဌ ဘုန်းတော်ကြီး Ven. Mok Tak Hye Eun နှင့် ဆိုးလ်မြို့ရှိ Lotte Hotel ၌နေ့လည်စာ အတူသုံးဆောင်ရင်း နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ၁၄၃၀ နာရီချိန်တွင် Korea Development Institute(KDI) သို့ ရောက်ရှိရာ KDI မှ တာဝန်ရှိသူများက KDI နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ၎င်းနောက် ၁၆၀၀ နာရီချိန်တွင် Korea Institute of Science and Technology (KIST) သို့ ရောက်ရှိရာ ဧည့်ခန်းမ၌ KIST မှ တာဝန်ရှိသူများမှ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းရပ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။